မင်းသမီးဆိုပေမယ့် အလှူစာရင်းနဲ့ အိမ်ထောင်မှုကိစ္စတွေကြားမှာ အလှတောင်မပြင်နိုင်ပဲ ဂူဂူဂါဂါဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ ချစ်သုဝေ - Cele Connections
ချစ်စဖွယ် ရုပ်ရည်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ပရိသတ်တိုင်း ကြွေရလောက်တဲ့ ချိုသာတဲ့ အသံလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ချစ်သုဝေကို လူကြီး၊ လူငယ် ပရိသတ်တိုင်း ချစ်ခင်ပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ချစ်သုဝေကတော့ ကလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ မရိုက်ကူးဖြစ်တော့ပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ သီချင်းသစ်တွေနဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ချပြတင်ဆက်နေလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ချစ်သုဝေက သမီးလေးတွေ နာမည်နဲ့ တည်ထောင်ထားတဲ့ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုလည်း ဦးစီးနေလျက်ရှိပြီး မိသားစုလေးကိုလည်း စောင့်ရှောက်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုကိစ္စ၊ အလှူကိစ္စတွေအပြင် Online ကနေ စာတွေ သင်ယူနေတဲ့ ချစ်သုဝေက သူမရဲ့ တစ်နေ့တာမှာ အလုပ်တွေအများကြီး ရှုပ်နေတာမို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မင်းသမီးဆိုတာကို မေ့ထားရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ချစ်သုဝေက သူမရဲ့ မပြင်မဆင်ပုံရိပ်လေးကို ချပြရင်း “အိုက်စကရင်ကတော့ စာဂျပိုးပါပေါ့🤣🤣 အမှန်တော့ ဂူဂါဂေါက်လေး ဒေါ်ထရီဇာပါ။ မလှမပ ဒေါ်treကို အချစ်တွေလည်းလျော့နေလောက်ပါပြီ😁😞 မင်းသမီးတဲ့??? ဆံပင်လေးပဲကြည့် ကြွေတွားမယ်🤣🤣🤣” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတစ်ခုကို ချပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သုဝေကတော့ အလုပ်တွေအများကြီးကို တစ်ယောက်တည်း လုပ်ကိုင်နေရတာမို့ ပြင်ဖို့ဆင်ဖို့ အချိန်ဆိုတာ မရှိသလောက်ကို နည်းပါးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကတော့ ချစ်သုဝေကို ဘယ်လိုပုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်ပြီးသားဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မငျးသမီးဆိုပမေယျ့ အလှူစာရငျးနဲ့ အိမျထောငျမှုကိစ်စတှကွေားမှာ အလှတောငျမပွငျနိုငျပဲ ဂူဂူဂါဂါဖွဈနပွေီဆိုတဲ့ ခဈြသုဝေ
ခဈြစဖှယျ ရုပျရညျလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့အပွငျ ပရိသတျတိုငျး ကွှရေလောကျတဲ့ ခြိုသာတဲ့ အသံလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ခဈြသုဝကေို လူကွီး၊ လူငယျ ပရိသတျတိုငျး ခဈြခငျပွီးသား ဖွဈမှာပါ။ ခဈြသုဝကေတော့ ကလေးမှေးပွီးနောကျပိုငျး ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ မရိုကျကူးဖွဈတော့ပမေယျ့လညျး ပရိသတျတှအေတှကျတော့ သီခငျြးသဈတှနေဲ့ ကွျောငွာတှကေို ခပြွတငျဆကျနလေကျြရှိပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ခဈြသုဝကေ သမီးလေးတှေ နာမညျနဲ့ တညျထောငျထားတဲ့ ခတျေသဈဖောငျဒေးရှငျးကိုလညျး ဦးစီးနလေကျြရှိပွီး မိသားစုလေးကိုလညျး စောငျ့ရှောကျနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မိသားစုကိစ်စ၊ အလှူကိစ်စတှအေပွငျ Online ကနေ စာတှေ သငျယူနတေဲ့ ခဈြသုဝကေ သူမရဲ့ တဈနတေ့ာမှာ အလုပျတှအေမြားကွီး ရှုပျနတောမို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ မငျးသမီးဆိုတာကို မထေ့ားရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာတော့ ခဈြသုဝကေ သူမရဲ့ မပွငျမဆငျပုံရိပျလေးကို ခပြွရငျး “အိုကျစကရငျကတော့ စာဂပြိုးပါပေါ့🤣🤣 အမှနျတော့ ဂူဂါဂေါကျလေး ဒျေါထရီဇာပါ။ မလှမပ ဒျေါtreကို အခဈြတှလေညျးလြော့နလေောကျပါပွီ😁😞 မငျးသမီးတဲ့??? ဆံပငျလေးပဲကွညျ့ ကွှတှေားမယျ🤣🤣🤣” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ပုံရိပျလေးတဈခုကို ခပြွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ခဈြသုဝကေတော့ အလုပျတှအေမြားကွီးကို တဈယောကျတညျး လုပျကိုငျနရေတာမို့ ပွငျဖို့ဆငျဖို့ အခြိနျဆိုတာ မရှိသလောကျကို နညျးပါးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကတော့ ခဈြသုဝကေို ဘယျလိုပုံလေးပဲဖွဈဖွဈ ခဈြပွီးသားဆိုတာ ယုံကွညျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
အမေကနောက်ယောကျာ်းယူသွားတဲ့အပြင် အရက်သမားအဖေက ငွေ(၁)သိန်းနဲ့ ရောင်းစားခြင်းခံနေရတဲ့ (၈)လအရွယ်သမီးလေးကို ခေါ်ယူမွေးစားခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ